बोइलर कुखुराको मासु तीन वर्षयता कै सबैभन्दा सस्तो ! हेर्नुहोस नयाँ मूल्य – Nepal Khabar
कुखुराको मासु पछिल्लो तीन वर्ष यताकै सस्तो भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । एक महिनामा तीन पटक मूल्य घट्दा पनि मासु नबिकेपछि प्रतिकिलो तयारी मासुको मूल्य दुई सय रुपैयाँबाट पनि तल झरेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको छ । ‘मासुको मूल्य तीन वर्ष यताकै सस्तो छ, दुई सय भन्दा कममा बेच्दा पनि बजारमा मासुको खपत बढेन,’ संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रय ढकालले भने ।
खपतको तुलनामा उत्पादन बढेका कारण बजारमा मासुको मूल्यको भाउ ओरालो लागेको भ्याली ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक एवम् मासु व्यवसायी सक्षम घिमिरे बताउँछन् । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर किसानले मासुको उत्पादन बढाएको तर बजारको खपत ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दा मासुको बिक्रीमा मन्दी आएको उनले बताए । ‘मासु धेरै खपत हुने होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, होटल जस्ता कोभिड-१९ले बन्द हुँदा मासुको खपत निरासाजनक भयो,’ घिमिरेले भने । लकडाउन अवधिमा मासुको व्यापार राम्रै भएपनि दोस्रो पटकको निषेधाज्ञाले व्यापार चौपट भएको उनको दाबी छ । मासु खपतका लागि सरकारी योजना नभएको र महामारीकै बेला आइपरेको संकटले व्यवसायी पनि अन्योलमा परेको घिमिरेले बताए । सामान्य अवस्थामा काठमाडौंमा दैनिक साढे दुई लाख किलो मासु बिक्री हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले सवा लाख किलो मात्रै मासु बिक्री भईरहेको संघले जनाएको छ ।
Tagged कुखुराको मासु
२ दिनभित्र तपाईंको काम बन्नेछ, बिल्कुलै बेवास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला अबस्य पढेर देवताको दर्शन गरौ
कुलमानको समर्थनमा उर्लियो जनसागर: उनलाई फेरि पनि नियुक्त गर्नुपर्छ भन्नेले एक सेयर गरौं
कुलमानलाई पुन: नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर खतिवडालाई जबर्जस्ती मन्त्री सरह सुबिधा दिएर राख्न मिल्ने !! यो कस्तो नियम
केपि ओलीको राष्ट्रियता! कालापानीसहितको नेपाली भूमि समावेश पाठ्यपुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीको रोक